२० लाखमा तयार भएको वडा कार्यालय भवन !२० लाख लाग्ला यो भवन लाई ? प्रतिक्रिया दिनुहोस - Nepali in Australia
September 29, 2021 autherLeaveaComment on २० लाखमा तयार भएको वडा कार्यालय भवन !२० लाख लाग्ला यो भवन लाई ? प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौ । आज हामिले एउटा अचम्म को फेसबुक मा भेटिएको फोटो प्राप्त गरेका छौ । यो फोटो माथी लेखिएको छ । एउटा सानो भवन लाई बनाउदा नेपालि रुपैया बीस लाख लाग्यो भनेर पोस्ट आएको छ । त्यो पोस्ट को तल रहेको कमेन्ट मा धेरै भन्दा धेरै गाली गलौज आएको थियो ।